🥇 ▷ Seefta Pokémon iyo gaashaanka ayaa soo saaray Pokémon cusub, xerada Poké iyo inbadan ✅
Seefta Pokémon iyo gaashaanka ayaa soo saaray Pokémon cusub, xerada Poké iyo inbadan
Seefta Pokémon iyo Gaashaanka Waxay ku dhowdahay kuna soo dhowaaneysaa bilaabashadiisa, Nintendo wuxuu umuuqdaa inuu go’aansaday inuu adeegsado Nintendo Direct inuu had iyo jeer naga tago wararka xanta ah ee ku saabsan gudbinta. Sidan, haddii munaasabad hore aan ku hayno waxa loo yaqaan hannaanka Gigamax, markan cinwaanka cinwaanku kama dambeeyo, oo wuxuu muujiyey muuqaalkiisa muuqaal ahaan wax aan ka yarayn oo aan ka yarayn. wadarta afar la yaab leh.
Kahor intaadan faahfaahinta gaarin, waan kaaga tageynaa fiidiyowga aan ku raaxeyn karno inta lagu guda jiro Nintendo Direct:
Marka, si hoose u sii wadida wararka, waxaan ku burburin doonnaa dhammaan waxyaabaha gudaha ku jira afar qaybood:
Habeeyn muuqaalka: Munaasabadan, Seefta Pokémon iyo Shield waxay noo oggolaaneysaa inaan si qoto dheer u habaynno avatarkeena, labadaba heerka labiska – galootiga, galoofyada iyo kuwa kale – sida timaha oo na siinaya taabasho gaar ah.
Xerada Poké: Mid ka mid ah sheekooyinka waaweyn ee munaasabadda. Shaqada Game Freak waxay noo oggolaaneysaa inaan xeraynno goorta iyo meesha aan rabno inaan ku xoojino xiriirka markaan la ciyaareyno Pokémon – taas oo markaa fududeyn doonta waxqabadka wanaagsan ee dagaalka. Sidoo kale, aagga Duurjoogta ah waxaan booqan karnaa xerada ciyaartoy kale, anagoo awood u leh inaan sameysano kooxo ilaa 4 adeegsadayaal kala duwan.
Curry: Seefta Pokémon iyo Shield waxay noo oggolaaneysaa inaan diyaarinno xad dhaafka cuntooyinka Curry – waxaan heysanaa Curridex iyo in kabadan 100 cunto oo kala duwan. Saxanka aan karno wuxuu ku xirnaan doonaa isku darka berry iyo waxyaabaha aan qabanno.
Pokémon cusub: Nintendo Direct wuxuu nagaga tagay labo Pokémon oo kala duwan:
Dhaqaale-yaqaanShaah nooca Pokémon Ghost-type. Waxay leedahay awooda ‘Fragile Armor’. Waxaa badanaa lagu rakibay hoteelada iyo maqaayadaha, iyagoo ku qariya saxanka.
JahawareerFlying Swallow Pokémon iyo biyo. Waxay leedahay awood ‘Tragamisil’, oo xagga quusidda ama hawo u oggolaaneysa inay ka muuqato dusha sare ee kalluun afkeeda ku jirto. Haddii lagu soo weeraro gobolka noocaas ah, wuxuu kalluunka ku gubi doonaa cadowga.
Nintendo wuxuu bilaabi doonaa hage istiraatiijiyad rasmi ah oo loogu talagalay Seefta iyo Seefaha Pokémon
Waxay u muuqan kartaa in Pokémon franchise uu yahay midka sameeya isbeddelo yar marka la sii daayo mid kasta oo uu soo bandhigo, isagoo ah kan xiga ee gaari doona Seefta Seefta iyo Beesha Gaashaanka. Si kastaba ha noqotee, haddii aan wax yar qodono…
Seefta Pokémon iyo gaashaanka ayaa arki doona iftiinka inta lagu jiro Nofeembar 15 sida daah fur u gaar ah Nintendo Switch.
Seefta Pokémon iyo gaashaanka ayaa soo saaray Pokémon cusub, xerada Poké iyo inbadan oo Cristian M. Villa ah